मदन कुमार अधिकारी ९ कार्तिक २०७७, आईतवार
यो पनि पढ्नुहोस् ... हो, म केपी ओलीको भक्त हुँ !
यो पनि पढ्नुहोस् ... प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईसँग मुटु भए यो बेला दुख्नुपर्छ !
यो पनि पढ्नुहोस् ... रामायण पढेर कम्युनिष्ट बनेका ओली, जसलाई यो परिवर्तनको माया छैन !
काङ्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले,शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको ट्विटमा चुच्चे नक्साको साटो बुच्चे नक्सा प्रयोग गरिएको भन्दै,ओलीको गयल-राष्ट्रबादको बिरोध गर्नु भएको छ। त्यो सही,गलत के हो प्रष्ट होला तर,राष्ट्रियतालाई आफ्नो अहंकार,कुण्ठा,महत्वाकांक्षा र पदलोलुपताको साधना गर्ने साधन बनाउने दुराशय त्यागौं,नयाँ नक्सामा छापिएको भूमी फिर्ता ल्याउन तर्फ लागौं। आशा गरौं, भारतिय सत्ताको महमा हाम्रा नेतृत्व झिंगा बनेर नटाँस्सियुन्